မိမိအသုံးပြုနေသောအီးမေးဖွင့်မရပဲ ,Email ပို့ ချင်သူများအတွက် | MTS Online Radio
← Gtalk ကိုအမြဲတမ်း Idle မီးဝါနေအောင်လုပ်နည်း။
၀င်းဒိုးXPမြင်ကွင်းကို ၀င်းဒိုး7 မြင်ကွင်းပြောင်းလဲသောဆောစ့်ဝဲလ်(၀င်းဒိုး Xp အတွက်သာ) →
မိမိအသုံးပြုနေသောအီးမေးဖွင့်မရပဲ Email ပို့ ချင်သူများအတွက်
ယနေ့ ခေတ် ၂၁ ရာစုမှာ IT နည်းပညာများတိုးတက်လာတာနှင့်အညီ လူတိုင်းလိုလို အီးမေးများကို အသုံးနေကြပါတယ်။အသုံးမပြုတတ်သူများတို့ ကလည်း ခေတ်နောက်ကျမခံရအောင်အားကြိုးမာန်တက်လေ့လာနေကြ။ အချို့ဆိုလျှင် အင်တာနက်အသုံးပြုတတ်ရန်။ အီးမေးများပို့တတ်ရန် ပိုက်ဆံကြေးကြီးပေးပီးမြန်မာပြည်မှာတတ်နေကြရပါတယ်။
အဲဒီလို အားကြိုးမာန်တက် သင်တန်းတွေတက်ပြီး အီးမေးလည်းကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သွားတဲ့အခါမှာ အင်တာနက်ကွန်နရှင်လေးနေတာကြောင့် (Internet Connection Receiving Signal Dealay) Email Web Sites တွေဖွင့်မရတဲ့အခါမျိုးကြုံရတဲ့အခါမျိုးရှိပါလိ့မ်မယ်။ မိမိကလည်းအီမေးကို သူငယ်ချင်၊မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်များထံသို့ အီးမေးပို့ ချင်သော်လည်း အထက်ပါကဲ့သို့ ကွန်နရှင် အခက်ခဲကြောင့် စိတ်ညစ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အောက်တွင်ဖော်ပြမည့် website များမှတဆင်အီးမေးပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
(သို့ မဟုတ်) OR
ထို web sites များမှ တဆင် မိမိ ပို့လိုသူထံ အီးမေးပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
အားလုံးပဲ လူမူပတ်ဝန်းကျင်တွင် အင်တာနက် ခေတ်ကြီးနဲ့အတူး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
မသိရှိသေးသူများလည်း သိရှိစေရန် စေတနာမေတ္တာ ဖြင့်ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
One comment on “မိမိအသုံးပြုနေသောအီးမေးဖွင့်မရပဲ ,Email ပို့ ချင်သူများအတွက်”
June 13, 2011 @ 10:10 pm
့ဟဲလို သယ်ရင်းကြီး မေးစရာရှိလို့.Mailတွေရဲ့ Password တွေကို တစ်ပါတ်တစ်ခါပြောင်းရတယ်ဆိုတာဟုတ်လား.
နောက်ပြီး wordpress က ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရော ဖွင့်လို့ရလား .နောက်ဆုံးတစ်ခုက သယ်ရင်းကို ဟိုတစ်ခါပေးတဲ့ blog က နာမည်ဆင်ဆင်ရှိလို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်.အဲဒီမှာဟာ blog က Invite readers တွေဘဲဝင်လို့ရတယ်ဟာ.အဲ သယ်ရင်းအများစုက စလုံးက လူတွေဟ. Reader list မှာ united states ဆိုပြီးပြနေလို့ အကောင့်တွေ ဘာတွေများ အဖောက်ခံလိုက်ရလားလို့ လန့်ဖြန့်ပြီး လောလောဆယ် အားလုံးကို ပိတ်ထားတယ်.swanswan86@gmail.com မှာ လာဖြေပေးရင် ကောင်းမယ်.